Dagaal Udhaxeeya Dad Shacab Ah iyo Ciidanka Kenya Oo Ka Socda Magalada Beled Xaawo.
Saturday December 23, 2017 - 10:55:31 in Wararka by
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo u dhaxeeya dad shacab ah iyo ciidamada Melleteriga Kenya uu ka dhacay degmo kaabiga ku heysa Xuduud beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
iska hor’imaad xooggan ayaa ka dhacay gudaha magaalada Beled Xaawo kadib markii ciidamo isugu jira Booliska iyo Melleteri Kenyaan ah ay gudaha usoo galeen magaalada, goob joogayaal ayaa sheegay in ciidanka Kenya ay isku dayeen in darbiga ku dherergsan Xuduud beenaadka ay gudaha usoo geliyaan magaalada arrinkaas oo sababay kacdoon shacabi.
Dad shacab ah oo iskood isku abaabulay ayaa dhagxaan ku weeraray ciidanka Kenya oo iyana rasaas ku asqeeyay magaalada kadibna waxaa bilaawday dagaal rasaas laysku adeegsaday, shacabka Beled Xaawo ayaa markii lasoo baxay qoryo gacmeedyo waxaana sidaas ku bilaawday dagaal culus.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalku uu xoogeystay waxaana ku biiray dhaalinyaro hubeysan oo deegaanka ah, kadib muddo 2 saacadood ah oo ay dagaallo culus socdeen ayay shacabka Soomaalida usuurtagashay in ciidanka Kenya ay ka qabsadaan goobtii ay weerarka kusoo qaadeen.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay dib ugu gurteen degmada Mandheera oo kaabiga ku heysa Beled Xaawo, xaalad kacsanaan ah ayaa lagasoo sheegayaa deegaannada xuduud beenaadka ku teedsan.
Dowladda Kenya ayaa doonaysa in ay ku luga fidsato magaalada Beled Xaawo islamarkaana ay dhul hor leh qabsato balse dadka deegaanka ayaa tallaabadaas ka dhiidhiyay waxaa xusid muda in maamulka dabadhilifka ah ee magaalada kajira uusan gacan ka geysan difaacidda magaalada taas oo banaanka soo dhigeysa dabadhilifnimadiisa.